User | maungmaung | Published | ShweHub
maungmaung | Published
By maungmaung 2525 days ago on နိုင်ငံတကာ from news.yatanarpon.com.mm
By maungmaung 2525 days ago on ဖျော်ဖြေရေး from www.mizzimaburmese.com
By maungmaung 2525 days ago on ပြည်တွင်း from www.mizzimaburmese.com
By maungmaung 2525 days ago on ဖျော်ဖြေရေး from news.yatanarpon.com.mm
By maungmaung 2525 days ago on ဟာသ from www.innewsmyanmar.com
ဆေးရုံတစ်ခုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် ဖခင်ဖြစ်သူဟာ ဆရာဝန်ကို ယခုဆို စကားသွားဆိုပါတယ်။
"ဆရာ. ကျွန်တော်တို့ လင်မယား ၂ ယောက်လုံး ဆံပင်အနက်ရောင်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကလေးကျမှ ဘာလို့ ဆံပင်နီဖြစ်နေတာလဲဗျာ"
ဆရာဝန် ဟာ မလုံမလဲနဲ့ပဲ
"ဟာ.. ဒါက ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျာ"
ဖခင်ကတော့ "- မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဆရာ၊ ကျွန်တော့ဘက်က ဆွေမျိုးရော၊ ဇနီးဘက်က ဆွေးမျိုးရော အားလုံး ဆံပင်အနက်တွေချည်းပါဗျာ. ဒါကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်" လို့ပြန်ပြောပါတယ်။
ဆရာဝန် က " ကဲဗျာ။ ကျွန်တော်သက်သေပြမယ်။ ခများတို့ ကလေးရဖို့ ဘယ်နှစ်ကြိမ်ကြိုးပမ်းခဲ့သလဲ" လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။
ကလေးအဖေဟာ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ အမှန်အတိုင်း ဖြေပါတယ် -
By maungmaung 2525 days ago on စားသောက်ဖွယ် from www.innewsmyanmar.com
ထာဝရနုပျိုသော အသက်၄၂နှစ်အရွယ် ၊ ကလေးနှစ်ယောက်အမေ
By maungmaung 2525 days ago on ကျန်းမာရေး from www.innewsmyanmar.com
Jung Dayeon လို့အမည်ရတဲ့ အသက် ၄၂ ကျော်ပြီဖြစ်တဲ့ ကလေး ၂ ယောက် မိခင် တစ်ဦးပါ။ ကလေးရပြီးနောက် ဝိတ် က ကီလိုဂရမ် ၇၀ ကျော်အထိတောင် တက်ခဲ့ပါတယ်။ နေရထိုင်ရလည်း အဆင်မပြေဖြစ်လာပြီး ဖျားနာလွယ်တဲ့ လူအိုတစ်ဦးလို ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါနဲ့ တစ်မနက်မှာ အိပ်ယာ ထထခြင်း သူ့စိတ်ခံယူချက်ကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။ ဝိတ်ကျပြီး သွက်လက်ချက်ချာ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်သူ တစ်ဦး ဖြစ်လာစေရမယ်လို့ ခံယူချက်ထားလို့ ဝိတ်ချတဲ့ အားကစားကို ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ပါတော့တယ်။၃ လအတွင်း ဝိတ် ၂၀ ကီလိုဂရမ်အထိ ကျဆင်သွားပြီး သူ့ရဲ့  ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ Life Style ကြောင့် ပုံမှာ မြင်တွေ့ ရတဲ့အတိုင်း နုပျိုသွားတာကို မြင်တွေ့ရမှာပါ။ သူ့ကို အသက် ၄၂ နှစ်လို့ပြောရင
By maungmaung 2525 days ago on အထွေထွေ from www.innewsmyanmar.com
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Manhatan မှာ နေထိုင်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ် ကျော်ကတည်းက အနင်းခံလာသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အစကတော့ ကြောင် လေးတွေ သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာ ဖြတ်သန်းသွားလာမှုကို နှစ်သက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း လူတက်နင်းတဲ့ အရသာကို ခံယူတဲ့အထိ တက်နင်းခံရတာကို စွဲလမ်း သွားခဲ့ ပါတယ်။ သူက အသက် ၅၂ နှစ် ရှိပါပြီ။ဒါကြောင့် အနင်းခံရတာကို ဆေးစွဲသလို စွဲပြီး နေအိမ်အနီးအနားက လူတွေကို တောင် ပိုက်ဆံပေးငှားလို့ တင်နင်းခိုင်းတဲ့အထိကို ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ အထူးသဖြင့် ဒေါက်ဖိနပ်စီးတဲ့ အမျိုးသမီးတို့ တက် နင်းတာကို ပိုလို့ သဘောကျပြီး ကလပ်တွေထဲမှာ မိန်းကလေးတွေ ကို တောင် အခကြေးငွေ ပေးလို့ နေ့စဉ် တက်နင်း ခိုင်းပါတယ်။အချိန်အတော်ကြာ လက်
By maungmaung 2537 days ago on စီးပွားရေး from news.yatanarpon.com.mm
ကျောက်တုံးကို လက်နက်အဖြစ် သုံးတဲ့ မြန်မာမျိုးရင်း မျောက်မြီးရှည်
By maungmaung 2537 days ago on အထွေထွေ from news.yatanarpon.com.mm
ကျောက်ခေတ် လူသားများကဲ့သို့ ကျောက်တုံးကို လက်နက်အဖြစ် အသုံးချနေသော မြန်မာမျိုးရင်း အမြီးရှည် မျောက်တစ်မျိုးသည် ထိုင်းနိုင်ငံ လအယ်စွန် အမျိုးသားဥယျာဉ် ဒေသ၌ မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်များနှင့် ခွေးများအတွက် ခြိမ်းခြောက် အန္တရာယ် ပေးနေကြောင်း နိုင်ငံတကာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးစာစောင်တွင် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။ ထိုမျောက်ကို စင်ကာပူ နန်ယန်းတက္ကသိုလ်မှ လက်ထောက် ပါမောက္ခ မိုင်ကယ်ဒီဂူးမက် ဦးဆောင်သော ပညာရှင်များက ထိုင်းနိုင်ငံ လအယ်စွန် အမျိုးသား ဥယျာဉ်ဒေသတွင် သုတေသန ပြုခဲ့ကြပြီး ထိုမျောက်မျိုးသည် ရှားပါးသော မျောက်မျိုးဖြစ်ကာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် မြန်မာနှင့် ထိစပ်သည့် ထိုင်းနိုင်ငံ နယ်စပ်တွင်သာ တွေ့ရသည်ဟု ဆိုသည်
ဂျပန်နီပွန်လေကြောင်း စက်တင်ဘာလကုန်တွင် တိုကျို-ရန်ကုန် နေ့စဉ်ပျံမည်
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး လေကြောင်းလိုင်း ဖြစ်သည့် All Nippon Airways (ANA) မှ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်မှ စတင်ကာ တိုကျိုနာရီတာ လေဆိပ်မှ ရန်ကုန်သို့ နေ့စဉ် ပျံသန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း အေအင်န်အေ လေကြောင်းမှ သိရသည်။ ခရီးသည် ၂၀၀ ကျော် တင်ဆောင်နိုင်သည့် (ဘိုရင်း ၇၆၇) လေယာဉ်ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျိုမြို့ နာရီတာလေဆိပ်မှ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ နေ့စဉ်ပျံသန်းမည်ဖြစ်ပြီး လက်မှတ် သက်တမ်းကာလပေါ် မူတည်၍ လက်မှတ်ဈေးနှုန်း အမျိုးမျိုးရှိ ကြောင်းသိရသည်။ All Nippon Airways (ANA) မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက “အရင်လေယာဉ်က လူဦးရေ နည်းနည်းပဲဆံ့တဲ့ အသေးစားနဲ့ တစ်ပတ်ကို သုံးကြိမ်ပဲ ပျံပေးတယ်။ အခုလေယာဉ်မှာ Business Class 3535cHe
By maungmaung 2537 days ago on နိုင်ငံတကာ from news.yatanarpon.com.mm
ဆီးဂိမ်းတွင် တည်းခိုဧည့်ခံရေးအတွက် တင်ဒါ တင်သွင်းထားသူများကို လူတွေ့စစ်ဆေး
By maungmaung 2537 days ago on ပြည်တွင်း from news.yatanarpon.com.mm
အမေရိကန်ဒေါ်လာ သုံးသန်းကျော် အကုန်အကျခံမည့် ဆီးဂိမ်း ဧည်ခံကျွေးမွေးရေးနှင့် တည်းခိုနေထိုင်ရေး ဆပ်ကော်မတီက တင်ဒါတင်သွင်းထားသည့် ကုမ္ပဏီများကို လူတွေ့စစ်ဆေးမှု စတင်ပြီဖြစ်ကြောင်း ယင်းဆပ်ကော်မတီမှ သိရသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်အထိ ၂၇ ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲသို့ လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် နိုင်ငံခြားသား အားကစားသမားများ၊ အုပ်ချုပ်သူ၊ နည်းပြများအား အစားအစာ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေး ဧည့်ခံခြင်းနှင့် အားကစားသမားများ နေထိုင်သည့် အိပ်ခန်းများ ထိန်းသိမ်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီများကို တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ ပြည်တွင်းပြည်ပ ကုမ္ပဏီ ၁၀ ခု ဝန်းကျင်အထ
Swan အဆောက်အအုံမှာ မြေငှားခနှင့် မြေအသုံးပြုခ ကြွေးကျန် ဒေါ်လာ ခုနစ်သိန်းကျော် မပေး၍ စည်ပင်မှ တရားစွဲထား
By maungmaung 2537 days ago on ပြည်တွင်း from www.first-11.com
ရန်ကုန်မြို့၊ လမ်းမတော် (၁) လမ်း၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် ကျုံးကြီးလမ်းထောင့်ရှိ အကျယ်အ၀န်း ၀ ဒသမ ၇၂ ဧကရှိသော ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာပိုင် မြေပေါ်တွင် စင်ကာပူ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအား BOT စနစ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ခွင့် ပြုခဲ့သော Swan အဆောက်အအုံမှာ စည်ပင်သို့ မြေငှားရမ်းခ ကြွေးကျန်နှင့် မြေအသုံးပြုခ ပရီမီယံကြေး စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ခုနစ်သိန်းကျော် ပေးသွင်းခြင်း မရှိသောကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီမှ ကုမ္ပဏီအား သုံးနှစ်ကြာ တရားစွဲထားကြောင်း သိရသည်။လူနေအိမ်ရာနှင့် စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်း အများစု ပါဝင်သော Swan အဆောက်အအုံမှာ အချက်အချာကျသည့် ကမ်းနားလမ်းတွင် တည်ရှိပြီး ယင်းအဆောက်အအုံကို စည်ပင်မှ မြေပေးက